Gorfayntii Khaalid J. Qodax iyo Fal-celintii Cali C. Coomay "Garawshiinyo waa geel siin". W/Q Cabdicasiis-Daacad Ibraahin
Gorfayntii Khaalid J. Qodax iyo Fal-celintii Cali C. Coomay "Garawshiinyo waa geel siin". W/Q Cabdicasiis-Daacad Ibraahin 0 January 17, 2015 in Suugaan by Staff Somalilandlive Media Visits: 1353
soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa "Garna garteedaa lagu doonaa, Mandheerna garkeedaa lagu doonaa." sidaa oo ay tahay, qoraalada kala ah " Gorfaynta
soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa "Garna garteedaa lagu doonaa, Mandheerna garkeedaa lagu doonaa." sidaa oo ay tahay, qoraalada kala ah " Gorfaynta Gorfayntii
Khaalid J. Qodax iyo Fal-celintii Cali C. Coomay
waa geel siin”. W/Q Cabdicasiis-Daacad Ibraahin
waxa ay ku maahmaahdaa "Garna
garteedaa lagu doonaa, Mandheerna garkeedaa lagu doonaa.”sidaa
oo ay tahay, qoraalada kala ah " Gorfaynta”
iyo "Fal-celinta”ee labada qoraa Khaalid
J. Qodaxiyo Cali
Waxa aan isku dayi doonnaa in aan ku dhex dhexaadiyo isla maqaalkan,
anoo raacaya sharciga maahmaahdan aan kor ku xusnay.
qoraalladu qeexayeen, waxa ay labada qoraa isku durreen, gorfaynta
kaas oo uu qoray Cali
J. Qodax.Si u aragayga iyo dareenkii aan ka qaatay labadan qormo, ayaan
idiinku soo gudbin maqaalkaygan.
horrayn, waxa aan idinla wadaagi gorfayntii Khaalid
J. Qodaxiyo sida aan u arkay. Kadib, fal-celintii Cali
Khaalid J. Qodax
aan akhristay, gorfaynta Khaalid ku sameeyay buugga "Colaadihi
uu qoray Cali
C. Coomay,waxa aan ka dheehday xog badan oo uu xambaarsanaa, taas oo qoraayada
iyo akhristayaashaba manfac u leh. Waxa aan ku arkay, iigana dhex
iftiimtay xeeldheerida iyo xirfadda qoraanimo ee Khaalid leeyahay,
isla taas oo aan ka dhaxlay talooyin badan oo qoraalka ku saabsan. Keligay,
ma filaayo in aan arkay laakiin akhristayaal badan in ay ila dhaadeen
ayaan rajeynayaa. Sidoo kale, waxa gorfayntii iiga soo baxday farriin
ballaadhan oo qoraa Khaalid u diraayo, cid kasta oo wax qorta. Si ay
uga waantoobaan, horkeenidda buug ku sheegyo.
cay iyo ceeb ka madhan ayaan akhristay, taas oo si kala dhiggan uu
Khaalid noogu soo gudbiyey. Si lamida aan wax uga baranay, halka uu
ku tiiq-tiiqsaday tayo xumi uu daabacaadda buugga ku sheeggay.
Qoraaga se aannu wax aflagaado badheedha u gaysan, haddii laga teggi
waayana uu Khaalid qoraaga ku canaantay, xirfad la’aan qoraal iyo
ka fiirsi la’aan astaamayneed.
aan Khaalid, intaa ka fahmay qormadiisa. Waxa aan iyana wax ka odhan
C. Coomayoo iyana kooban.
Cali C. Coomay
gorfaynta, buugga "Colaadihii
Geeska”ee uu qoray Cali
C. Coomay,waxa ii xiggay fal-celin uu kusoo sameeyay qoraagu. Markaa aan
akhriyey waxa iiga soo baxay, dhaliillo uu qoraagu ka cawday iyo mid
uu isagu tuurayba. QoraaCali C.
Coomay,qoraaga buuggan "Colaadihii
Geeska”kuwaas oo ka qarxay qarniyo ka hor, ee dhex maray Soomaalida iyo
Itoobiyaanka. Waxa aan qoraalkii fal-celinta ahaa ka xusi karaa : in
uu qoraagu isla markiiba si cadho leh, uga fal-celiyay gorfaynta
Khaalid. Taas oo uu kabaha la dul maray si cadho leh, qoraa Khaalid
kuna eeddeeyay in aannu si caafimaad qabta u gorfayn, in aannu
keligii gorfayn ee lala waday gorfaynta iyo in uu aflagaado dusha
uga tuuro Khaalid iyo shakhsiyaad kale oo uu ku eeddeeyay,
xaasidnimo iyo isa-sidid (is koryeelid) taas oo uu ku caan baxay
ayuu yidhi Khaalid.
waxa uu soo taxay ceebo badan oo uu Khaalid ku yidhi, laakiin aanan
anniga iyo akhristayaashu ku arkin gorfayntii Khaalid. Si lamida waxa
uu qaatay dhaliilihii loo soo jeediyay, qaar ka mid ah. Waana
gobonimadiisa qoraa Cali
ujeedada, labadan qormo iyo qaar weheliya oo qoraayada loogu mahad,
markhaati iyo maragba furaayey ayaa igu kelifay in aan qoro qormadan.
Oo aan uga dan leeyahay dhex dhexaadin iyo garba simmid labada dhan
ah. Waxa aan kaga soo horjeedsanayaa dhalinta qalin baradka ah, ee
kaga faa’idaysanaya inay labada qoraa hadba mid garabka saarraan oo
maqaallo usoo tebiyaan. Maqaalladaas oo aan ku dhisnayn, dhex
dhexaadin iyo ka run sheeggid sida ay wax u jiraan.
aan, gunti uga dhigayaa maahmaah Soomaaliyeed oo tidhaa "Rag
in loo abaal-guddo iyo in laga aarsado ka farabadan”. "Is hubaa
qoraa, hal baa seegtay. Khaalid
J, Qodaxhal baa seegtay, oo buugga inuu dabaqo ayaa seegtay, gorfeeyana
cutubyadiisa sida caadada ah. Isagoo dul ka xaadis samaynaya, oo aan
macnaha buugga ka tegayn.
hal baa seegtay oo inuu si deggan u qaato, kol hadduu yidhiba soo
gorfee Khaalid buugga inuu cadho iyo ciil fal-celiyo may ahayn.
Hadalka kiisa dhuuxa leh ayaa laga raacaaye, "
Ilaahoow eexna hanagu dilin, aqoondarrina nagu cadaabin”. Isu
fal-celinta, I maqlaayda ah iyo dadkan buunbuuninaya hala joojiyo
Somaliland No Comments yet... Print
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items HAQAYILINE QAADKA ISKA DAA WAA QUUD IBLIISE ! W/Q, Abdirahmaan H. Osman ( GEELE)
Daawo: Waraysi Ku Saabsan Mucda Suugaanta Hal-abuur Nageeye Cali Khaliif
19/04/2017 - 10:25:42
Daawo Madaxwayne Ismacil Cumar Geele oo Wax Lagu Qoslo kutilmaamay Ururka Takfiiriga ah ee Al Saaciduuna Bilxaq
16/04/2017 - 12:18:24
Gudoomiyaha Ahna Murashaxa Madaxweyne Ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe Iyo Aqoonyahanka Reer Borama Oo Jilbaha Is Dhigay -Sawiro
15/04/2017 - 11:14:25